I-Pisces kunye neLibra-Ukuhambelana kwiSini, uthando kunye noBomi - Pisces
I-Pisces ehambelana neLibra kuThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembela. x
Iintlanzi kunye neLibraUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo
Umoya kunye naManzi, iLibra kunye neePisces zibonakala zingenanto efanayo. Nangona kunjalo, akufanele silibale uxhulumaniso lwabo ngoVenus, umlawuli weLibra, ophakanyiswe kwiPisces. Ekubeni bechukumisana kwesi sijikelezi-langa sinothando, basenokufumana ulwaneliseko lokwenene lwesini kunye. Bobabini bangaba ngabathandi abangazicingeliyo, abakhathalele ngakumbi ukwaneliseka kweqabane labo kunabo.
Ukuthantamisa akufuneki kube ngumba apha kuba akukho namnye kwaba maqabane uya kuthanda ubundlongondlongo kunye noburhabaxa kunjalo. Babenokufumanisa izinto ezininzi ezithandwayo ngokwesondo ababengazazi ngaphambili, ngonxibelelwano lwendalo eyahluke kakhulu. Ukuba abazange badibaniswe yiVenus, kuya kuba nzima kakhulu ukuba benze ubudlelwane naluphi na uhlobo, kuba indlela yabo yokuphila kunye nobulili buhluke ngokupheleleyo.
Iqabane likaLibra lifuna umntu owomeleleyo, onomdla kunye nokuzithemba, ngelixa iqabane lePisces lifuna umntu othambileyo, onovelwano kwaye uyazazi iimvakalelo zabo. I-Libra iya kufuna amava abo esondo ngokukhawuleza kwaye anomdla, kwaye iiPisces ziya kufuna ukuba zicothe kwaye zibe nemvelo. Umba oyintloko wesantya udla ngokugqithiswa yindalo eguqukayo ngokukhawuleza yePisces, ngaphandle kwakwiimeko xa beneentloni kakhulu ukuba batsibe kubudlelwane bezesondo nomntu onjengokwesondo ngokuphandle njengeLibra.
IiPisces kunye neLibraThembela
Abayi kuvana kakuhle ngokwaneleyo ukuze babelane ngokuthembana okukhulu. Isidingo Iponti kufuneka yamkelwe kwaye ithandeke ngabanye abantu iya kuchazwa ngokungalunganga yiPisces, kuba abaqondi ukuba ukuzithemba komntu kunokuba kuphantsi kangakanani. Oko kukhazimla, kuhlala kuthando, ubuntwana, ubunjani bePisces kuya kuba lucime olukhulu kuLibra, ongayi kukwazi ukuthemba umntu obonisa ngokuphandle umdla wabo kwabanye abantu. Ekuphela kwendlela yokuba la maqabane ahlale kubudlelwane obuthembekileyo kukusondela kubo ngokungaqhelekanga kwaye bakhe ukuqonda kunye nokuthembela kwabo ukusuka ku-zero, ngokungathi abazange babenabo ubudlelwane ngaphambi kolu.
IiPisces kunye neLibraUnxibelelwano kunye nengqondo
Kwiimeko ezininzi, i-Libra iya kuxabisa ithemba kunye nemvelo yobuntwana yobuntwana beqabane labo lePisces. Ngelishwa, baya kufuna ukubanceda bakhule kwaye batshintshe ukuba bangobani ukuze bonwabe ngakumbi. Ingxaki apha kukuba uLibra akazi okanye azame ukuqonda ukuba yintoni enokwenza iiPisces zonwabe ngokwenene. Oku kukungahloniphi okusisiseko kwaye kunokonakalisa isiseko sobudlelwane babo bonke. Owona mceli mngeni uphambili apha kukuhlala kubudlelwane obunentlonipho, nangona kunjalo iiPisces eziphambeneyo zinokubonakala kwiqabane labo laseLibra, okanye nangona kunjalo iLibra eqinile kwaye iyadika isenokubonakala kwiiPisces.
Unxibelelwano lwabo lunokukhuthaza logama nje bengazami ukutshintshana, bacaciselana ngendlela abafanele bacinge ngayo okanye bazive ngayo kwiimeko ezithile, okanye okubi nangakumbi, bafundisane indlela yokuziphatha. Iqabane lePisces linokuthi ngqo kwaye lizenzekele kwaye oku kunokubeka emngciphekweni umfanekiso weLibra ezama ukuwugcina emehlweni abanye. Ukuba bafumana izenzo zomnye nomnye zikhuthaza ngayo nayiphi na indlela enokwenzeka, banokufikelela kwinqanaba apho baya kuthethana ngokwenene ngaphandle kokugweba.
IiPisces kunye neLibraIimvakalelo
Uqhagamshelo lwabo ngokweemvakalelo lubonakaliswa ikakhulu ngokunqula uVenus kuphawu lwe IiPisces . Olu luthando olungunaphakade olulindele ukwenzeka, kunye nohlobo olunokuthi luzalwe phakathi kwala maqabane xa bobabini boyisa i-ego yabo. Kuya kuba yinto enqabileyo kwaye iingqiqo zabo ziya kubanzima, kuba iLibra iyayiphakamisa iSaturn, kwaye iiPisces zilawulwa nguJupiter. Iingqondo zabo mhlawumbi ziya kuzaliswa zizo zonke iintlobo zolwazi olungenamsebenzi de bagqibe kwelokuba kunzima kakhulu ukuba babe kunye.
Ukuba badlula inqanaba lokungahloneli kwaye babeke imida eyomeleleyo, bekhulisa ubuntu bomnye nomnye kunye nokuzimela, banokufikelela kwinqanaba lokusebenzisana ngokweemvakalelo. Ngokungathi babengenamingeni eyaneleyo, oku kuya kwenzeka ngokuqhelekileyo ngexesha elahlukileyo. I-Libra iya kukhawuleza kwi-showoff yeemvakalelo, iqonda ukuba ifumene uthando, kodwa iiPisces aziyi kuziva naluphi na uthando de kube luthuli lonke kwaye banexesha lokuvala amehlo abo kwaye bazive. Ukuba ixesha labo livaliwe, ngokuqinisekileyo baya kuluphelisa ulwalamano lwabo ngokufanelekileyo, bengalindelanga lukhulu omnye komnye kwixesha elizayo.
IiPisces kunye neLibraImilinganiselo
Bobabini baya kuxabisa uthando kwaye le yinto eya kubadibanisa ngaphezu kwayo yonke enye into. NgeVenus ekugxilwe kuyo, bobabini baya kufuna ukuthandwa kwaye babaxabise abo baziyo ukuba bayibonise njani, ishushu ukonwabela ubomi, ukutya kunye nesondo, kunye nendlela yokwenza abo babathandayo baneliseke. Oku kunokubanika isiseko esiluqilima sobudlelwane bezesondo ukuba batsaleleka omnye komnye kwasekuqaleni. Abanye abalinganiswa babo baya kwahluka kakhulu kwaye ngelixa iLibra iya kuxabisa ukuhambelana nokuzinza, iiPisces ziya kuxabisa ukuzenzekelayo kunye nokukwazi komntu ukulandela intliziyo yabo. Ukuba bobabini bakholelwa ukuba banomsebenzi apha eMhlabeni, kwaye kwenzeka ukuba imisebenzi yabo inqumla iindlela, banokukhuthazana ukuba balwele into abayixabisa kakhulu - amagama abo kwiinkwenkwezi.
IiPisces kunye neLibraImisebenzi ekwabelwana ngayo
I-Indecisive Libra yile nto kanye iqabane labo lePisces aliyifuniyo ukuze bangaziva belahlekile ngokupheleleyo ebomini kunye nayo yonke imisebenzi abayikhethileyo. Ingxaki apha kukuba ngexesha leLibra lithatha isigqibo sokuba ngaba bafuna ukwenza into okanye cha, iiPisces ziya kutshintsha iingqondo zabo izihlandlo ezihlanu, zingaqinisekanga ukuba le nto iyona nto ibhetele kubo, ngenxa yobudlelwane babo, ngenjongo yobomi kunye nomsebenzi wabo, njl. Ukubuzwa kweLibra kuya kuphakamisa izikrokro kwiiPisces ngokulula okubuhlungu. Baza kulawula ukufumana imisebenzi abaya kuyithanda bobabini, kwaye ukuba akukho nto yimbi isebenzayo banokuhlala beguqukela kulo naluphi na uhlobo lobugcisa. Owona mbuzo ngulo - ngaba baya kufuna ukwenza nantoni na ngelixa bekunye? Banokukhupha amandla amaninzi kunye nokuzithemba omnye komnye bezama nje ukwenza isicwangciso sobusuku.
ILibra kunye neePisces zinendawo yokuhlangana kubuhle beVenus. Sekunjalo, bayibona ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo kwaye abayi kuhlonelana ngokwaneleyo ukufumana ubuhle beVenus komnye nomnye. Banokuba nengxaki yokwenene yokulungelelanisa isantya seqabane labo, kwaye umgangatho oguquguqukayo wePisces kaninzi awuyi kubanceda bavule ngokukhawuleza ukwakha ubudlelwane kwisantya esiya kuhambelana neqabane labo leLibra. Zombini iLibra kunye neePisces zinokuzincama zibe nomdla ekwanelisekeni kweqabane labo, kwaye oku kufanele kubancede bahlale kwicala elihle lobudlelwane babo nantoni na eyenzekayo phakathi kwabo. Ukuba badlulela ngaphaya kokungabi nantlonelo nolindelo olungekho ngqiqweni oluvela kubuntu bomnye nomnye, basenokufumanisa ukuba babelana ngothando lokwenene.
Pisces I-Capricorn Emanzini Virgo Khetha Uphawu